My freedom: Shopping!!
လာမယ့်အပတ်မှာ အလုပ်က Annual Dinner and Dance Party ရှိတယ်။ ဒီတစ်ခါ Theme က "Bling Bling"... မနေ့က အလုပ်ကအပြန် Shopping သွားတယ်။ အဲ့ပွဲအတွက် ၀တ်ဖို့အကျီလိုက်ကြည့်တာ။ West Gate က ကန်ဒီကြိုက်တဲ့ "Sixties" ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို အရင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင်က အကျီတွေက Retro Style လေးတွေ... အဲ့ဒီစီးကွင့်တွေနဲ့ အဖြူရောင်အကျီလေးကြိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း ၀ယ်လိုက်တယ်။ တခြားအရောင်တွေလည်း ရှိတယ်။ အဖြူရောင်ဆို အောက်က ဘာအရောင်နဲ့တွဲတွဲလိုက်တယ်ဆိုပြီး အဖြူပဲယူလိုက်တာ... Usual Price က SGD 59 လို့ရေးထားပေမယ့် Discount ရှိနေတာနဲ့ SGD 20 နဲ့ရတယ် ^_^
အဲ့ဆိုင်ကို ကန်ဒီမကြိုက်တဲ့တစ်ချက်က အကျီတွေကို Try လို့မရဘူး။ Discount Item မို့လို့လားတော့ မသိဘူး။ တော်မတော် မသေချာ မရေရာနဲ့ ၀ယ်ရတယ်။ စကပ်ကိုကျတော့ကန်ဒီက 3/4 Pencil Skirt လိုချင်တာ... ကန်ဒီ့မှာအဲ့လိုတစ်ထည်မှ မရှိလို့ရော... အဲ့လိုစတိုင်လ်မျိုး တစ်ခါမှ မ၀တ်ဖူးလို့ရောပေါ့။ လိုက်ရှာတာ ကန်ဒီကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလုံးဝမတွေ့ဘူး။ နောက်ဆုံးကြိုက်တာတွေ့တော့လည်း အမည်းရောင်... အမည်းရောင်လုံးဝမ၀ယ်ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာ အဲ့ဒီအမည်းရောင်ပဲဝယ်ဖြစ်တယ် (>.<)။ ကန်ဒီမှာရှိတဲ့အ၀တ်တွေအကုန်လုံးက အဖြူ၊ အမည်း၊ အပြာ၊ ခရမ်း ဒါတွေချည်းပဲ။ ခုလည်း ဒီဘူတာပဲ ဆိုက်တယ် ဟဟဟ(xD)။ Robinsons က... သူလည်း Discount ပဲ... Normal Price SGD 39 ကို SGD 19 နဲ့ရတယ် :D :D
Robinsons မှာ စကပ်စမ်းဝတ်ကြည့်တာ... စမ်းမ၀တ်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အကျီပါ ထုတ်ဝတ်ကြည့်တယ်။ 3/4 Pencil Skirt ဆိုတော့ ဒူးဖုံးတယ်... အရှေ့ကကြည့်ရင် လှတယ်။ ဘေးကကြည့်ရင်တော့ သိပ်မလှဘူး... ဟီး စကပ်ကလှတယ်... လူကမလှတာကို ပြောတာ။ တင်တွေဘာတွေရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ပိုလှမှာပေါ့နော် xD xD
လည်ပင်းက ပလိန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဆွဲကြိုးဝယ်ရမယ်။ ဖိနပ်က ကန်ဒီ့မှာရှိတဲ့ အမည်းရောင်ပဲ စီးမယ်။ ဆံပင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မစဉ်းစားရသေးဘူး။ ကိုင်ဖို့အိတ်လည်း စဉ်းစားရဦးမယ် ဟဟဟ (xD)။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် DND က "Retro" Theme... ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပုံ
နေ့လည်စာကို Shopping ထွက်ရင်း (၃)နာရီလောက်မှ Curry Times မှာစားတယ်။ အဲ့ဆိုင်မှာ ကန်ဒီအကြိုက်ဆုံးက Coffee Chendol... တယောက်တည်းစားရတာတော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ အကျီတွေဝယ်ပြီးတော့ Pet Lovers Centre မှာ ကန်ဒီ့ယုန်လေးတွေအတွက် အစာသွားဝယ်တယ်။ မန်ဘာကဒ်နဲ့ ဒီလက ကန်ဒီ့ Birthday Month ဆိုတော့ Discount ပိုရတယ်။ ကန်ဒီလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ Bunny Cage လေးကို မေးကြည့်တာ သူတို့မှာ Out of Stock ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ဘယ်အချိန်ရမလဲဆိုတာလည်း လုံးဝမသေချာဘူးတဲ့ :(
ရှေ့အပတ်ကတော့ နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်မယ့်အပတ်။ အဂါင်္နေ့ အလုပ်ပြီးရင် Seminar တစ်ခုသွားရမယ်။ ကြာသာပတေးနေ့ Branch Dinner ရှိတယ်။ အလုပ်ကလူတွေအကုန်လုံး Dinner သွားစားကြမှာ။ စနေနေ့ကျတော့ Annual DND...
Happy weekend everyone^^
ဒီမှာဒူးဖုံးစကပ်ကုို စိတ်ကြိုက်ရှာလို့ ကိုမတွေ့ ဘူး။
ရောက်ခဲ့တယ် သကြားလုံးလေးရေ .... ပို့စ်လေးတွေဖတ်ရတိုင်း စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။ ချစ်ဖို့အားကြီးကောင်း ♥♥♥